Mi Mix4ကို Xiaomi ရဲ့ Hyper ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့မြင်ရဦးမလား
2019 ဒုတိယနှစ်ဝက်။ ဒီကာလဟာ Calendar ကျဆိုရင် Xiaomi ရဲ့ Mi Mix3successor, Mi Mix4မိတ်ဆက်ရမယ့်ကာလ။ အဲဒီအစား Xiaomi က Mix Alpha ဆိုတဲ့ ဖုန်းအလန်းကြီးကို စျေးအလန်းကြီးနဲ့ မိတ်ဆက်ချသွားပါရော။
ခက်တာက ဒီဖုန်းဟာ စျေးကွက်ထဲကို တကယ်ရောက်မလာခဲ့ပဲ တရုတ်ပြည်က Mi Store တစ်ချို့နဲ့ MKBHD လို Channel လောက်မှာပဲ Concept Phone အဖြစ် မြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာ နှမြောစရာပါ။
Credit: MKBHD YouTube
ဒီလိုနဲ့ Mix Series အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီလားလို့ ထင်မှတ်ခဲ့ကြရာကနေ ၁နှစ်ဝန်းကျင်အကြာ ခုချိန်မှာတော့ Mi Mix Series နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသံတစ်ချို့ကို Xiaomi ဆီကနေ ပြန်ကြားလာရပါပြီ။
ဆိုတော့ Mix series ဝယ်ဖို့ နီးစပ်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တဲ့ Fan တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဟိုတစ်စ၊ ဒီတစ်စ သတင်းလေးတွေဟာ ဒီ Article ဖြစ်လာစေမယ့် သဲလွန်စတွေ ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။
Mix Series Recap
Mi Mix series လို့ ကြားလိုက်ရင် Full Screen Display ကို ပထမဆုံးချပြနိုင်ခဲ့တဲ့ Model အဖြစ် Tech နဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိသူတွေ သိကြမှာပါ။
ဒီဘက်ခေတ်ရဲ့ Screen sound Tech ဖြစ်လာမယ့် Piezoelectric နည်းပညာကိုလည်း ပထမဆုံး Mi Mix မှာ မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။
ဒါ့အပြင် Mi Mix3ဟာလည်း Full Screen Display ရဲ့ evolution မှာ နည်းလမ်းတွေထဲက သူမတူတဲ့ Slider နည်းလမ်းကို သုံးခဲ့တဲ့ ခပ်ရှားရှား ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ခဲ့ပြန်တယ်။
ဒီလိုနာမည်ကောင်းတွေရှိခဲ့ပေမယ့် Mix Series မှာ အားနည်းချက်တွေကလည်း ခပ်များများရယ်။ Camera quality မကောင်းတာ၊ battery အပါအဝင် specification အားနည်းချက်တစ်ချို့ကြောင့် လူတွေရင်ထဲ ထင်သလောက်မပေါက်ရောက်ပဲ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ဒါကြောင့် ဖုန်းတိုင်းလိုလို screen size ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့ 2020 လို ကာလမျိုးမှာ Mi Mix လို series အတွက် Unique ဖြစ်စရာသိပ်မရှိလို့ တစ်ခန်းရပ်ခဲ့ပြီဆိုပြီး fan တွေဘက်က တွေးခဲ့ကြတာလည်း လွန်တော့ မလွန်ပါဘူး။
သို့ပေမယ့် ခုချိန်မှာတော့ Mi Mix series ရဲ့ successor အတွက် မျှော်လင့်ချက်အလင်းလေးတွေ မြင်လာခဲ့ရပါပြီ။
New Mix Alpha?
မကြာခင်ကာလက LetsGoDigital မှာ စိတ်ဝင်စားစရာ Design တစ်ခုကို Xiaomi ကနေ Patent လုပ်ခဲ့တာကြောင့် အဲဒီ Design ဟာ Mix Alpha အသစ်အတွက် Design ဖြစ်လာမလားဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်လာခဲ့ကြတယ်။
ဒီ Patent Design မှာ Xiaomi ဟာ ရှေ့၊ နောက် Dual Screen ကို Waterfall Display နဲ့ တစ်ဆက်တည်းပုံစံ ဖန်တီးထားတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
နောက်ထူးခြားတဲ့တစ်ချက်က Camera ၃ လုံး၊ ၄ လုံးပြူးတွေအစား 108MP တစ်လုံးထဲကို f/2.0 ကနေ f/5.0 အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်မယ့် Camera မျိုးလို့ ဖော်ပြထားတယ်။
ဆိုလိုတာက ဒီတစ်လုံးထဲသော Camera ဟာ Lossless zoom လို feature မျိုးပါ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။ အမိုက်ဆုံးတစ်ချက်က Dual screen ကို သုံးပြီး Main Camera ကိုပဲ Seflie Camera အဖြစ်ပါ သုံးနိုင်မယ့်အချက်။
ဆိုလိုတာက ဖုန်းရဲ့ ရှေ့မျက်နှာပြင်ဟာ လုံးဝ Full Screen Experience ပေးနိုင်မယ့် Display မျိုး ဖြစ်နေမယ့်သဘောပေါ့။
Overall Design အရဆိုရင် ဒီဖုန်းဟာ ရှေ့က Mi Mix ထက် ပိုပြီးလက်တွေ့ကျ အသုံးတည့်မယ်လို့တောင် မျှော်လင့်နိုင်မယ့် ဖုန်းမျိုးပါ။ (စျေးလည်း မြောက်မှာဆိုပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက်တော့ တကယ်ထုတ်ရောင်းဖို့ မျှော်လင့်ရတာပဲ)
Mi Mix Series ရဲ့ ထူးခြားချက်ထဲမှာ Selfie Camera ကို Screen အပေါ်ဘက် လုံးဝအတင်မခံတဲ့အချက်လည်း တစ်ချက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း Mix 2s အထိ Seflie ရိုက်ဖို့အတွက် ဖုန်းကို ဇောက်ထိုး ပြန်ကိုင်ခဲ့ရသလို Slider Design လို နည်းလမ်းမျိုးပါ စမ်းသုံးခဲ့တဲ့အထိပါပဲ။
ဒါပေမယ့် OPPP နဲ့အပြိုင် Selfie Camera ကို Display အောက်မြှုပ်မယ့်နည်းပညာကို Xiaomi က ကြေငြာခဲ့သလို Mi Mix Series မှာ ဒီနည်းပညာ စသုံးမယ်လို့ ထင်ကြေးပေးခဲ့သူတွေအတွက် Mi Mix Series အသစ်ထွက်မယ့်သတင်းတွေဟာ ဒီနည်းပညာ အသင့်ဖြစ်ပြီလားလို့ ထပ်မေးစရာဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။
Compact Phone with Single Camera?
ဒီရက်ပိုင်းမှာ လေကျွင်းတစ်ယောက် သူ့ Weibo ကနေ ထူးထူးဆန်းဆန်း post တွေ တင်လာပါတယ်။ ပထမဆုံးသတိထားမိတာက Mi Mix2အကြောင်းပါ။
Mi Mix2ဟာ Mix 1 တုန်းက အားနည်းချက်တစ်ချို့ကိုပြင်ဆင်ပြီး 6” Display, ပိုကျစ်လစ်တဲ့ size နဲ့ ထွက်လာခဲ့တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံး။ ကိုယ်တွေ ခုချိန်ထိ ကိုင်ဖူးခဲ့သမျှ Xiaomi ဖုန်းတွေထဲ Compact & Premium Feeling အရဆုံးလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဖုန်း။
ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တွေဆက်လာခြင်းဟာ Compact Phone တွေ ရွှေလိုရှားနေတဲ့ Android နယ်ပယ်ကွက်လပ်ကို Mi Mix4နဲ့ ဝင်ဖြည့်တော့မှာလားဆိုပြီး တွေးစရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Why Single Camera?
Mi Mix Series ဟာ ဘယ်တုန်းကမှ Camera အသားပေးတဲ့ model မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ Mix3မှာတုန်းက Dual Camera ဟာ သူတို့ရဲ့ မိုင်ကုန်လို့တောင် ပြောနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Dual Camera သုံးထားတဲ့ Mix 2s အစား Mix2ကို ချပြတာဟာ Mix Series အသစ်ကို Single Camera ဆီ ပြန်သွားမယ့်သဘောလား?
ဒါ့အပြင် Weibo မှာ Xiaomi ရဲ့ ပထမဆုံးဖုန်း Mi 1s ပုံ သူ့ဆီက ထပ်တက်လာပြန်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေအရ Mi Mix model အသစ်ဟာ Single Camera နဲ့ ပွဲထွက်လာမယ်လို့ ကောက်ချက်ဆွဲရမလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါဆို ဘာ sensor သုံးမှာလဲ? ဒါကတော့ 108MP လား၊ ဒါမှမဟုတ် Vivo V50 Pro + မှာ စသုံးထားတဲ့ GN1, 50MP Sensor လားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
Ceramic Body with Classic Colors?
လေကျွင်းအနေနဲ့ သူ့ Mi Mix2post မှာ ဒီဖုန်းရဲ့ Ceramic Unibody Design ကိုလည်း အသားပေးပြောသွားခဲ့တယ်။ Ceramic Body ဆိုတာ Mi Mix နဲ့ ခွဲမရတဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်် Fan တွေလက်ခံထားကြပြီးဖြစ်မှာပါ။
ပုံတွေမှာလည်း Mi Mix2ရဲ့ Ceramic White Version ကို အသားပေးဖော်ပြခဲ့တာကြောင့် Mi Mix Model အသစ်မှာ Classic ဆန်တဲ့ အဖြူ၊ အနက်ရောင်တွေကို basic model တွေအဖြစ် မြင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။
တတိယအရောင်ကိုတော့ ဘာအရောင်သုံးမယ်မပြောတတ်ပေမယ့် တရုတ်တွေ အထွတ််တမြတ်ထားလေ့ရှိတဲ့ ကျောက်စိမ်းကိုယ်စားပြု Jade Green ကို Color Option တစ်ခုအဖြစ် မြင်တွေ့ချင်မိပါတယ်။
Mi Mix4and its whereabouts
Premium Flagship ပီပီ အများစုကတော့ 120Hz Display, 120W Fast Charging တို့လို Bleeding Edge Tech တွေ မျှော်လင့်ကြမှာဆိုပေမယ့် ဒါတွေက နောက်နှစ်ထွက်မယ့် Mi 11 (or Mi 20) အတွက် Selling Point တွေ ဖြစ်လာနိုင်တာမို့ Mi Mix4မှာ 90Hz Display, 30-50W Fast Charge လောက်ပဲ မြင်ရဖို့ ကိုယ်တွေတော့မျှော်လင့်မိတယ်။
Dual Speaker? Mi 10 Pro မှာ ဆရာကျခဲ့တဲ့ Symmetrical Speaker တွေကို မြင်ချင်ပေမယ့် Mi Mix4က Audio အသားပေးတဲ့ဖုန်း ဖြစ်လာပါ့မလားဆိုတာတော့ သံသယဝင်မိတယ်။
IP68? Premium Phone တစ်လုံးအတွက် ဒီကွက်လပ်ကို Xiaomi အနေနဲ့ Mi Mix4မှာ စဖြည့်ကြည့်သင့်ပြီလို့ ထင်မိတယ်။
Snapdragon 865+ with 5G? နှစ်ဝက်ကျော်လာပြီဆိုတော့ ရိုးရိုး 865 ထက်စာရင် Plus version ကို သုံးဖို့ပိုများလိမ့်မယ်။ (But even 865 is still enough, right?)
Linear Vibration Motor? Premium Feeling ကို အသားပေးမယ့်ဖုန်းတစ်လုံးအဖြစ် Mi Mix4ကို ရည်ရွယ်တာသေချာရင် ဒီအချက်ကို မမေ့လောက်ဘူးလို့ ကိုယ်တွေတော့ ယူဆတယ်။
Mi Mix2မှာ 6” Display ကို 3400 mAh သုံးနိုင်ခဲ့တာမို့ Compact phone တစ်လုံးအနေနဲ့ 3500 ကနေ 4000 mAh Battery ကြား မျှော်လင့်ပါတယ်။
တရုတ်ပြည်တွင်းစျေးဟာ Global ထက် သိသိသာသာ သက်သာတတ်တာ PI စျေးကွက်နဲ့ ရင်းနှီးသူတွေ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
Mi 10 Pro ရဲ့ Basic Model (256/8 GB) ဟာ Europe စျေးဟာ 999 Euro က စတယ်ဆိုပေမယ့် တရုတ်ပြည််တွင်းမှာတော့ $700 ဝန််းကျင်နဲ့ ရနိုင််တဲ့အထိ သက်သာနေတယ်။
ဆိုတော့ Mi Mix4ရဲ့ Basic Model (May be 128GB) ကို $800 လောက်က စလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းချင််တယ်။ $1000 အထက် ဘာညာ Edition ကိုလည်း မြင်ကောင်းမြင််ရနိုင်ပါတယ်။
Mi Mix Series အသစ်သတင်းတွေနဲ့အတူ ရုပ်ဆိုးဆိုး Concept တစ်ခုထွက်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ Selfie Camera အပါအဝင် Volume နဲ့ Power Button တွေကိုပါ Display ညာဘက်ဘေးမှာ နေရာအပိုယူပြီး ထည့်ထားတဲ့ Design ပါ။ဒီလိုရုပ်ဆိုးတဲ့ Design မျိုးနဲ့တော့ Xiaomi က သူ့ Premium Series ကို မလုပ်လောက်ဘူးယူဆတဲ့အတွက် ဟာသလို့သာ မှတ်ယူပါလေ။
လေကျွင်းရဲ့ Mi Mix2ပုံတွေကို ရိုက်ထားတဲ့ဖုန််းက Mi Note3ပါ။ ဒါဟာလည်း Hint တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ရင် Mi CC Series (Mi Note Series for Global) အသစ်် မိတ်ဆက်ချိန်ရော နီးလာခဲ့ပြီလား????
အပေါ်ကအချက်တွေစုပြီး ကောက်ချက်ဆွဲရင် Mi Mix4ဟာ Specification အကြမ်းစား Performance Beast, Camera Beast ဆိုတာထက် Luxury ဆန်ဆန် Hands-on feeling ကို High-end ဖုန်းတွေရဲ့ အခြေခံလိုအပ််ချက်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားတဲ့ Compact Phone for Gentlemen နဲ့ ပိုတူနေပါလိမ့်မယ်။
သူ့ထက်ငါ Specification သာအောင် အပြိုင်ကြဲနေကြတဲ့ Android နယ်ပယ်မှာ သူ့ရဲ့ Compact Design နဲ့ Ceramic Body အစပ်အဟပ်ဟာ ပြိုင်ဘက်တွေ ခြေမချသေးတဲ့ Market Segment အတွက် ရော အများနဲ့မတူအောင် Differentiate လုပ်ဖို့ပါ Xiaomi အတွက်အခွင့်အရေးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
“Mix Elegence with Excellence” လို့ တင်စားချင်တဲ့ ဒီအိပ်မက်တွေသာ လက်တွေ့ဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ Mi Mix4ကို “Just shut up and take my money.” လို့သာ ပြောထားပါရစေ။
Own Article created by Xyon, edtied by 2B
Mi 10 Review by Xyon
K30 Pro Review: The Inheritor by Xyon
Reference Sources: Marques Brownlee YouTube Channel ၊ LetsGoDigital via Notebookcheck
မိတ်ဆက်ပွဲမတိုင်ခင် Specification အပြည့်စုံ ပေါက်ကြားလာတဲ့ Galaxy Note20 Ultra